မယ်သံ: အိမ်ထောင် သားမွေး
အိမ်ထောင်ပြု ပြီး ကြပြီ ဆိုရင် ချစ်လို့ ဘဲ ပြုပြု တခြားဘာကြောင့်ဘဲ ပြုပြု ချက်ချင်းမဟုတ်တောင် သားသမီး လိုချင်လာတာ ထုံးစံပါ ။အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီး မယူလိုသူတွေ ရှားမှာပါဘဲ။
ခုတော့ စလုံးမှာ တချို့ စုံတွဲတွေ သားသမီး မယူချင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်သတဲ့ ။ခေတ်ကလဲ ခေတ်ကျပ်ကြီးကို ။
အရွယ်လေး ရောက်လာတော့ မိဘ အိမ်နဲ့ ခွဲခွာပြီး ကျောင်းသွား အလုပ်ဝင် ပြီးတော့ နိုင်ငံ ရပ်ခြားမှာဘဲ ဖူးစာဘက်ရှာ အိမ်ထောင်ပြု ကြပြန်တော့ တချို့ လဲ အိမ်ထောင်သားမွေး ၀ီစိ ကိတ်စများတာကို သိပ်မသိဘူေးပါ့ ။
အများပြော အရ ဆို ဒီလို ဘဲ ပြီးတော့ လဲ ပြီးသွားတာပါဘဲ ...းP
အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ မှာ မိန်းမ က အလုပ်လဲ လုပ်ရသေးတယ် ဆို ရင် တော်တော်ပင်ပန်းမှာပါ ။ ယောင်္ကျား က တဘက်တလမ်း က ကူညီဦးမှ ။ ကူညီဘို့ ဆိုတာလဲ ကူညီတတ်တဲ့ အတွေး၊အမြင် ရှိဦးမှ ။ တချို့ မိဘ အိမ်တွေမှာ အမ ညီမ များပြီး ဖအေ လုပ်သူကို ထမင်းစားခါနီး လက်ဆေးရေ ပါ အသင့်ချပေးတဲ့ အိမ်က လာတဲ့ ယောင်္ကျားလေး ဆို သူ့မှာ အဲဒီအမြင်က ပါလာပြီးသား။ များသောအားဖြင့် အညာသားတွေ ဆို အဲလို အမြင်ရှိတာ များပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ညီမလေးများ စဉ်းစားတော့မယ်ဆို ရင် အညာသားများ ခဏဖယ်ထားပြီး အောက်သူအောက်သား အရင်စဉ်းစားဘို့ အကြံပြုပါရစေ ...(((အဟမ်း ..အဟမ်း)))
(ပြောင်းပြန်အတွေးအရဆို ယောင်္ကျားလေးများစဉ်းစားရင် အညာသူဦးစားပေးပေါ့ဗျာ)
ကျမ အတွက်တော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့အချိန် ဇိမ်အကျ ဆုံးပါဘဲ ((အမ်))
အလုပ်ထဲမှာရော အိမ်မှာရော ညှာကြတာကိုး ။ (ရန်ကုန်မှာရော စလုံးမှာပါ အတွေ့အကြုံရှိပါရဲ့)
အိမ်ထောင်ပြုချိန်မှာ အသက်က ကြီးနေပြီ ဆိုတော့ (အသက်အစိတ်မှပုခက်မချိတ်နိုင်ရင် တသက်မနိပ်ဘူး ဘာညာကြားဖူးတယ်) တန်းပြီး ကလေး ယူမယ်စဉ်းစားပါတယ် ။ အသက်ကြီးမှ ဆို ကလေး ဥာဏ်ရည်မှီမမှီ ဘာညာ ကလဲ ရှိသေးတာကိုး ။
ကိုယ်ဝန်လဲ ရှိရော ရုံးမှာ အတူတူ လုပ်နေကြသူတွေထဲ ကလဲ ကိုယ်ဝန်ရှိကြရော(ဗက ဘိုးဘိုးကြီး အပြောအရ ဆို ဘိုက် ဖော် ) တခုခု ဆို တိုင်ပင်လို့ ရတာပေါ့လေ ။ နားလည်ရတာပေါ့ ။
(အခု ရေးထားတာ တွေ က ဆေးပညာသဘောတရားအရ မှန်မမှန် မသေချာပါ ။ အရပ် က မြန့်မာထုံးစံ အယူအဆ အကြံပေး ကြ တာတွေ မှ မှတ်မိသလောက်ပြန်ရေးတာပါ။)
များသော အားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ ကို ၆ ပတ်လောက်မှ စပြီး သိကြပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန် ရှိကြတော့ သူများတွေ အန်ကြတာပေါ့ ။ ကျမ ကတော့ ခန ဘဲ အန် လိုက်ရတယ် ။ နည်းကောင်းတွေ့ သွားတာကိုး ။
* ကိုယ်ဝန် ၅-၆ ပတ်မှစပြီး အန် တတ်ပါတယ်။ အန်ရခြင်းအကြောင်းက သန္ဒေတည်တဲ့ အရည်ဟာ ကလေးပုံသဏ္ထန် ပြောင်းဘို့ အမြှူပ်တွေဖြစ်လာပြီး ဒီအမြှူပ်တွေ အထက်ကို ဆန်တက်သလောက် ရင်ထဲမှာပျို့ပြီးအန်တာပါ ။ မစားချင် မသောက်ချင်လဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မြန် နဲ့ ပြည့်သွားသလို အစာ မျိုး စားပေးဘို့ပါဘဲ ..တဲ့ ။
ကျမ ကတော့ ငှက်ပျောသီးလို ၊ ကြက်ဥပြုတ်လို ၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း လိုမျိုးစားပေး လိုက်ပါတယ် ။ အန် တဲ့ဒဏ်ကို အကြာကြီးမခံလိုက်ရပါဘူး ။ တပတ်လောက်နေတော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ။
စလုံးက ဆရာဝန်တွေကတော့ အန်တာရပ် ဘို့ ဆေးပေးပါတယ် ။ ပင်နစူလာ က ဆေးခန်းမှာလဲ ရပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ကြိတ်မှန်၇ွက် ကို ညှစ်သောက်လို့ အရပ်စကားရှိပါတယ်။
* ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်က စပြီး ၃ လ အထိ ကုန်းတာ ကွတာ ခါးချိုးတာ အလုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်တာ နောက်ဆုံး လမ်းတောင် မြန်မြန် မလျှောက်သင့်ပါဘူး ။ ကလေး ပျက်ကျတတ်ပါတယ် ။
အပူများသောအစားအစာ ၊ အထူးသဖြင့် ရေနွေးပူပူ မသောက်ခိုင်းပါ အမြှူပ် ကလေးတွေ အနေအထားပျက်ပြီးမွေးလာတဲ့ အခါ ပုံစံမမှန်တဲ့ကလေးဖြစ်မှာစိုးလို့ပါတဲ့ ။
အရပ်ပြောစကားပါ ။ ကျမကတော့ ဆင်ခြင်ခဲ့ပါတယ်။
* ကိုယ်ဝန် ၄ - ၁၀ ပတ်ဟာ ကလေးလေး စတင်အသက်ဝင်လာပါပြီ ။ ဗမာအယူအဆ ဆိုရင် ၀ိဥာဏ်စ၀င်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ကောင်းသော ၀ိဥာဏ် ၀င်လာနိုင်စေရန် မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းခြင်း မိမိ ပြုခဲ့ဖူးသော ကောင်းမှူ ကုသိုလ်များကို ပြန်ပြောင်းသတိရ၍ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ ကို အမျှဝေ ဆုတောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမယ် ။
ညမှောင်မှောင် လျှောက်သွားခြင်း အသုဘ အိမ် သွားခြင်း ရှောင်ရပါမယ်။
*ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါ ဘယ်အချိန် ဆေးခန်းကိုသွားအပ်သင့် သလဲ ။
ကျမ ပထမ ကိုယ်ဝန်တုန်းကတော့ အမေ က ၄ လဆို သွားပြပေါ့အေ ။နုတုန်းတော့ ဘာသွားပြမှာလဲ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။
မဟုတ်ပါ ။ ကိုယ်ဝန် ၇ှိကြောင်းသိပြီဆိုတာနဲ့ တန်းသွားပြသင့်ပါတယ် ။
ဒါ မှ ဆေးစစ်စရာ တွေ လုပ်သင့်တာတွေ ကိုစောစောစီးစီး လုပ်နိုင်မှာပါ ။
ဒုတိယ အကြိမ် စလုံးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ သိပြီးပြီးချင်း ၆ ပတ်မှာဘဲ သွားပြပါတယ် ။ ရက်ကျော်ပြီ ဆိုတော့ သိတာပါ ။ ထူးထူးခြားခြား မူးတာ အန်တာတွေ အဲဒီ အချိန်မှာ မရှိသေးပါဘူး ။
အရမ်း ရှည်နေပြီ လို့ ထင်တဲ့ အတွက် ဆက်ဖတ်ဘို့ ပျင်းမှာ စိုးလို့ ဒီမှာဘဲ ရပ်လိုက်ပါမယ် ။ အောက်မှာ ဂူးဂယ် က ကိုယ်ဝန် ပထမ ၃ လ အတွင်း ဖြစ်မဲ့ပြောင်းလဲမယ့် ဟာတွေ နဲ့ ဘာတွေစစ်ရမယ်ဆိုတာ ကို ကူးတင်ထားပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ အမှန်က ညီမ မဒိုးကန် Miscarriage ဖြစ်သွားပြီး ကူးဆူးကျွန်း သွားခဲ့တာရော သူခံစားရတာလေးတွေ လာပြောပြတာရောကြောင့် ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေမှာ ဆင်ခြင်စရာလေးတွေ ဆေးပညာအရ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ရှေးထုံးစံအရ အမေ တွေ က သူတို့အတွေ့အကြုံအရ ပြုစုတာ တွေ ကို အမေ တွေ နဲ့ ဝေးနေတဲ့ အိမ်ထောင်သည် ညီမ လေးတွေ အတွက် ရေးချင်ခဲ့တာပါ ။
စာ ရေးမတတ်သူတို့ ထုံးစံအတိုင်း ရေးချင်တာက တခြား ထွက်လာတာက တခြားပါ ။
မြန်မာစာသင်တုန်းက သံခိပ် ကို မပိုင်နိုင်ခဲ့တာရောပေါ့။
GOOGLE ထဲက ပြောတာကတော့ ( http://pregnancybeauty.blogspot.com/)
Posted by Nausheen Farrukh at 11:36 PM0comments
If the results of these first trimester screening tests are abnormal, genetic counseling is recommended. Additional testing such as chorionic villus sampling or amniocentesis may be needed for accurate diagnosis.
Posted by Thandar Lwin at Saturday, December 10, 2011
slym December 11, 2011 at 4:33 PM
Good knowledge sharing..Great post.
NSA December 19, 2011 at 11:06 PM
တို့က ၇ ပတ်မှာစသိတယ်.... နေမကောင်းတာ ၁ ပတ်လောက်ကြာတာနဲ့ ဆေးခန်းပြရင်းသိတာ....
OG ဆီရောက်မှ scan ဖတ်တော့မှ ၇ ပတ်မှန်းသိတယ်... (ဟီး)
ကလေးက နှလုံးလေးခုန်နေတာမြင်ြရတာ ရင်ထဲ ပူနွေးသွားလိုက်တာ.... ။
ကူးကူးလှိုင် November 23, 2012 at 2:40 PM
Thandar Lwin November 26, 2012 at 8:44 PM
ဗဟုသုတ ရတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်တော် ။
Nu nge January 31, 2013 at 4:30 PM
Thandar Lwin April 14, 2013 at 3:09 PM
Nu nge ရေ ညီမလေး ကွန်မန့် က စပန်ထဲရောက်သွားတော့ အမ မသိလုက်ဘူးဇြစ်သွားတယ် ။ ဇန်န၀ါရိထဲကဆိုတော့ အခုချိန်မှာ သေချာသိနေပြီထင်တယ်နော် ။ နေကောင်းရဲ့လား ဟင်။
အမ မသိလိုက်လို့ ပြန်မပြောဖြစ်တာ စိတ်မကောင်းဘူး ။ နေလို့ ကောင်းပါစေ နော် ။
ဂျက်ကီ September 29, 2013 at 12:55 AM
၅ ပတ် ၆ ပတ်ဆို ကိုယ်ဝန်ရှိတာသိပြီပေါ့နော်
ကောင်မလေးဂျင်းဘောင်းဘီမှာ သုက်ပေတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်လား ခင်ဗျာ
Thandar Lwin April 14, 2013 at 3:08 PM
၅ ပတ် ဆိုရင်ပဲ သိသာလာပါတယ် ။ ရှိမရှိ စစ်တဲ့ စတစ်လေး နဲ့ တိုင်းကြည့်လို့ မပေါ်သေးခင်တောင် မိန်းကလေးရဲ့ ရင်သားတွေတင်းလာတာ ၊ အစာ မစားနိုင်ပဲ လေအန်တာ စသဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
ယောကျားလေး နဲ့ မိန်းကလေး မထင်မှတ်ပဲ ဆက်ဆံမိလို့ ကိုယ်ဝန်ရှိသွားမှာကြောက်စိတ်နဲ့ သုတ်ကိုအပြင်ထုတ်ပေမဲ့ မသေချာဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဆက်ဆံစဉ် ထဲက သုတ်က အထဲကို ၀င်သွားပြီးလို့ပါတဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း သောက်ရတဲ့ဆေးရှိပါတယ်တဲ့ ။ အသေးစိတ်ကို ဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ ၁၈ နှစ်အထက်တွေ ဖတ်သင့်တဲ့ ဆေးပညာစာများမှာ ရှာပြီး ဖတ်ပါနော် ။
၄ ပတ်အတွင်း ၇ှိမရှိစစ်တဲ့စတစ်လေးနဲ့ စစ်ကြည့်တာလည်း ၄ခါလုံး negative ပဲပြပါတယ်
အဲတာလေ ကိုယ်ဝန်မရှိဖူးလို့ ယူဆလို့ရပြီလားဟင်
Thandar Lwin July 18, 2013 at 8:17 PM
ရာသီက ပုံမှန်ဆို ၂၈ ရက် သို့ ၃၁ ရက်အတွင်း ခြားတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိစဆိုရင် စတစ်လေးနဲ့ စစ်ပေမယ့် မပေါ်သေးတာလဲရှိတတ်ပါတယ်။ စတစ်နဲ့ စစ်ရင် ၆ပတ်လောက်မှ သေချာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရင်ပြည့်နေသလိုဖြစ်တာ ရင်သားတွေတင်းလာတာတို့တော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုက ဘာမှမခံစားရပဲ ဆေးထိုးတော့ လာတယ်ဆိုတာ မရှိလို့ဖြစ်မှာပါ ။ ရာသီလာပြီးသွားပြီဆိုတော့ စစ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ။ အလုပ်မှာ စိတ်ဖိအားများရင်လဲ ရာသီလာတာနောက်ကျတတ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ ( အသက် ၁၈ နှစ် ကျော် ဆေးပညာစာများ ) ထဲမှာတော့ အသေးစိတ်ရေးထားသလို ဆရာ့ကို မေးချင်ရင်လဲ မေးလို့ရပါတယ် ။